Ngaphezu ukubuza imibuzo ngezinye izikhathi zemvelo futhi ngezindlela ezingaphezu timongcondvo zemvelo, ubuchwepheshe obusha futhi sisivumela ukuba ushintshe uhlobo imibuzo. imibuzo Iningi inhlolovo ziyavaleka, lapho abaphendula imibuzo ukukhetha ukukhetha isethi eyabhalwa abacwaningi. Kuyinto inqubo Kwenye inhlolo-vo ovelele umcwaningi izingcingo Ngokwesibonelo, nakhu umbuzo avaliwe inhlolovo 'sibekezelelana amazwi emlonyeni zabantu. ":
"Lo mbuzo olandelayo ngendaba yomsebenzi. Ngicela sibheke leli khadi ungitshele into kulolu hlu ubungeke abaningi bathanda emsebenzini? "
Ayikho sisengozini ixoshe;
Amahora okusebenza zimfushane, isikhathi esiningi khulula;
Umsebenzi kubalulekile, futhi unikeza umuzwa wakhe wokuzizwa ewutho.
Manje nanku umbuzo ofanayo wabuza ngendlela evulekile:
Nakuba le mibuzo emibili avele iyafana, ukuhlola Ucwaningo olwenziwe yi-Howard Schuman noStanley presser (1979) lwembula ukuthi zingaba nemiphumela ehluke kakhulu kunalokho oyikho: cishe ngo 60% of the imiphumela evulekile ziwela ngaphandle nemikhakha responses avaliwe (Figure 3.7).
Figure 3.7: Ezenye kusuka Schuman and Presser (1979) . Izimpendulo awafani kuncike ekutheni umbuzo wabuza e ifomu evaliwe noma evulekile.
Nakuba imibuzo evulekile avaliwe kungazuzisa ulwazi kuhlukile kunokunikeza futhi bobabili yayithandwa ekuqaleni ucwaningo inhlolovo, ivaliwe imibuzo laba bafikile ukubashaya linqobe ensimini. Lokhu nokubuswa akubangelwa imibuzo avaliwe iye kungase kutholakale ukunikeza nesilinganiso kangcono, kunalokho kungenxa yokuthi kulula kakhulu ukusebenzisa; inqubo esephepheni imibuzo levulekile kuyinto yenkinga futhi kubize kakhulu. Ukuthutha kude imibuzo evulekile Kuyishwa ngoba yiso ulwazi ukuthi umcwaningi akazange wazi kusengaphambili ukuthi kungaba usizo kakhulu.
Kwezinye ucwaningo engikwenzele ne UKaren Levy, sazama ukwakha uhlobo olusha umbuzo inhlolovo ehlanganisa izici best of kokubili imibuzo evulekile kanye evaliwe (Salganik and Levy 2015) . Okungukuthi, lwenza abacwaningi ukuba bafunde ukwaziswa okusha njengokungathi umbuzo evulekile, futhi yiso sibathelela lula ukuhlaziya imininingo njengokungathi umbuzo evaliwe. Eshukunyiswe izinhlelo online eliqhutshwa okuqukethwe okukhiqizwa umsebenzisi, okuyinto Wikipedia kuyinto yesiboniso, thina esibizwa uhlelo lwethu i inhlolovo wiki. By ecwaninga izici Wikipedia kanye inhlolovo bendabuko, sithemba ukudala indlela entsha kokubuza imibuzo.
Inqubo iqoqo idatha inhlolovo wiki kuboniswa project esakwenza ne Office New York City leMeya ukuze sihlanganise imibono izakhamuzi 'ku PlaNYC 2030, kugcineke plan eNew York edolobheni kabanzi nangamaphesenti. Ukuze uqale inqubo, iHhovisi leMeya elakhiwe uhlu 25 imibono esekelwe tekufinyelela ebantfwini zabo zangaphambili (isib, "Dinga zonke izakhiwo ezinkulu ukuqiniseka energy nekghono ngcono," nesithi "Fundisa Izingane mayelana nezindaba green njengengxenye ye esikoleni esivamile"). Ukusebenzisa le mibono 25 ngokuthi "imbewu," Office leMeya wabuza lo mbuzo: "Yikuphi kokulandelayo ocabanga ukuthi umqondo ongcono mayelana nokwakha iluhlaza, mkhulu New York City?" Esakhuluma banikezwe a pair of imibono (sib: "Vula schoolyards yonkana umuzi njengoba zokudlala umphakathi "futhi" Yandisa ezihlosiwe umuthi ekutshaleni ezindaweni high isifuba somoya rates "), futhi akakhethe phakathi kwabo (Figure 3.8). Ngemva kokukhetha, abantu okwaxoxwa nabo ngokushesha wethulwa nomunye pair ngezikhathi ezikhethiwe imibono. Esakhuluma sakwazi kakhulu bachubeka nekusisa timali ulwazi mayelana izintandokazi zabo inqobo nje ayefisa ngoyedwa yokuvota noma sikhetha "Angikwazi ukunquma." Okuqakatheke, noma yingasiphi, abantu okwaxoxwa nabo bakwazi ngisho nokuba neqhaza imibono yabo siqu, okuyinto-ilinde ukuvunywa the leMeya Office aba ingxenye yaleso echibini imibono ethulwe abanye. Ngakho, imibuzo ababambiqhaza kubufakazi kokubili ivulekile futhi ivaliwe kanyekanye.
Figure 3.8: Interface for a inhlolovo wiki (Salganik and Levy 2015) .
IHhovisi leMeya umkhankaso wiki yayo inhlolovo ngo-Okthoba 2010 ihambisana uchungechunge yemihlangano yomphakathi ukuthola impendulo ohlala. Over cishe izinyanga ezine, 1.436 abaphendula imibuzo waba negalelo 31.893 izimpendulo kanye nemibono emisha 464. Ngalokujulile, 8 top 10 amagoli imibono alayishwe ababambiqhaza kunokuba ingxenye iqoqo imbewu imibono evela ehhovisi leMeya. Futhi, njengoba thina chaza ephepheni lethu, lokhu kuyinto iphethini in eziningi survey wiki. Ngamanye amazwi, lapho sikhulumisana ngokukhululekile ukwaziswa okusha, abacwaningi bakwazi ukufunda ngezinto ukuthi ngabe ngifisa Ngokusebenzisa izindlela ezibonisa avaliwe more kufane nokubuza.